Muqdisho: Dabley dil iyo dhaawac u geysatay saraakiil ka tirsan Nabadsugidda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Dabley dil iyo dhaawac u geysatay saraakiil ka tirsan Nabadsugidda
14th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Dabley bastooladu ku hubeysan ayaa xalay xaafadda Arjantiin ee degmada Kaaraan ku toogtay labo ka mid ah ciidamada nabadsugidda Soomaaliya, waxaana weerarkaas ku geeriyooday mid ka mid ah raga la weeraray, halka mid kalana dhaawacmay.
Sida uu warbaahinta u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada Kaaraan, Axmed Xasan Yalaxow, weerarka oo ay qaadeen rag watay bastoolado ayaa lagu dilay Col. Axmed Sheekh Cabdulle oo ka tirsanaa ciidamada nabadsugidda madaxtooyada Soomaaliya, waxaana lagu dhaawacay sarkaal kale oo ka tirsan nabad sugidda oo lagu magacaabo C/raxmaan Gerweyne.
“Weerarku wuxuu ka dhacay xaafadda Arjantiin, dhabarka dambe ee hotel Lafweyn, waxaana ku dhintay Col. Axmed Sheekh C/lle, waxaana ku dhaawacmay C/raxmaan Gerweyne oo labaduba ka tirsanaan ciidamada nabad sugidda” ayuu yiri gudoomiyaha degmada Kaaraan, Axmed Xasan Yalaxow.
Toogashada labadan sarkaal ayuu gudoomiyuhu ku eedeeyey iney ka dambeeyaan Alshabaab, isagoo xusay in falkaani yahay mid aad ugu yar degmada Kaaraan.
Wuxuu sheegay gudoomiyuhu in howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska iyo nabad sugidda degmooyinka Kaaraan, Yaakhshiid iyo Hiliwaa lagu soo qabtay labo qof oo laga shakiyey, loona gudbiyey laamaha barista.
Degmada Kaaraan ayaa ka mid ah degmooyinka ugu nabdoon gobolka Banaadir, hase ahaatee xaafadaha ay xadka kala leedahay degmooyinka Yaakhshiid iyo Hiliwaa ayaa mararka qaar wax ka dhacaan.
Wafdi uu horkacayo gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya oo booqasho ku jooga Taliyaaniga
Cudur aan la garan oo dhowr qof ku dilay Bakool